Therese Casey waxay ku biirtay McKnight Foundation sanadkii 1988 waxayna u shaqeysay sidii ay u maamuli laheyd ilaa 1999. Kaalinta ay hada ku leedahay agaasimaha maaliyada, Casey waxay mas'uul ka tahay maareynta xisaabaadka maaliyadeed ee Hay'ada iyo soo gudbinta warbixinteeda si loo hubiyo u hogaansanaanta mabaadi'da guud ee la aqbalay, sharciyada dawlada, gudaha xakamaynta, iyo dhaqanka ugu fiican. Waxay hogaamisaa kooxda maaliyadeed si ay ula kulmaan waajibaadka dhaqaale ee aasaasiga ah iyo shuruudaha warbixinta. Casey wuxuu kaloo isku xiraa xisaabaadka sanadlaha ah ee aasaaska iyo howlaha diyaarinta canshuuraha, wuxuu caawiyaa madaxweyne ku xigeenka maaliyada iyo u hogaansanaanta diyaarinta miisaaniyada sanadeedka, wuxuuna taageeraa guddiga maaliyada iyo hanti dhowrka.
Intii ay shaqeyneysay, Casey waxay horseed u ahayd horumarinta barnaamij hadiyadeed oo u dhigma shaqaale, waxay maamushay ka beddelka buuga - nidaamka xisaabinta ku saleysan kumbuyuutarka, waxayna kormeertay kala-guurka jeegga - habka lacag-bixinta elektarooniga ah. Waxay hadda hogaamisaa koox lagu soo oogay inay u beddeleen nidaam maaliyadeed oo daruur ku saleysan.
Intii uu ka shaqeynayay aasaaska, Casey wuxuu shahaadada koowaad ee xisaabaadka ka qaatay Jaamacadda Saint Thomas wuxuuna noqday xisaabiye guud oo shahaado haysta. Casey, oo ah qof dadaalaya inuu waxbarto inta uu noolyahay, wuxuu marki ugu dambeysay kahelay jaamacada Minnesota shahaadooyin kusaabsan maaraynta mashruuca, hagaajinta hanaanka ganacsiga, iyo isgaarsiinta. Waxay hadda u shaqeysaa dhanka shahaadada falanqaynta ganacsiga.
Hawlaha iskaa wax u qabso ee Casey waxaa ka mid ah dhismaha guryo ay ka kooban tahay Habitat for Humanity's Jimmy Carter Work Project oo ku taal Puebla, Mexico, iyo u adeegidda sidii cashuur bixiye loogu talo galay Pillsbury House ee magaalada Minneapolis iyo xubin ka tirsan guddiga latalinta xisaabaadka ee kulliyadda bulshada ee deegaanka. Casey wuxuu ku firfircoon yahay kooxo badan oo diiradda saarey fikirka naqshadeynta, fikirka halista ah, hal-abuurnimada, iyo sheeko-qorista Waxay ku raaxeysataa jardiinada waxayna haysataa shahaado ku saabsan dhaqashada dhirta.
30 Sano Adeegga McKnight
By Therese Casey, Molly Miles Abriil 2018